एमाले छाडेका बामदेव कता ? - सहकार्य मिडिया सहकार्य मिडिया राजनीति
७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१० Amit Neupane	0 Comments
काठमाडौं, ७ कात्तिक । बामदेव गौतम औपचारिक रुपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष छन् । तर, उनले आफू एमालेमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
एमालेको विधान महाधिवेशन अगावै बामदेवले एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, एमालेले अझै उनलाई उपाध्यक्षका रुपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । अविधान महाधिवेशनमा गौतम देखिएनन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन गौतम खुलेर लागेका थिए । उनी नेकपा फुट्न नदिन सक्रिय भए । पछि एमाले फुट्न नदिन पनि विभिन्न विकल्पसहित प्रयासमा रहे । गौतम दुवैमा असफल रहे । उनले विज्ञप्तिमार्फत् माधव नेपालको साथमा रहने भनेका थिए । तर, अझै निर्णय लिएका छैनन् ।
गौतमले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदशर्क सिद्धान्तका रुपमा राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । एमालेबाट फुटेको नेकपा एसले भने जबज छाडेको छ ।
समाजवादलाई सिद्धान्तका रुपमा उल्लेख गरिसकेको छ । सैद्धान्तिक बहसका अलावा बामदेवको नेकपा एसप्रति केही असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनी नेकपा एसमा सहअध्यक्ष चाहन्थे । एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखेर उनको व्यवस्थापनको विषय उठेपनि सहमत भएनन् ।
नेकपा एसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर गौतम सहभागी हुने चर्चा थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्री कसैलाई नदिने निर्णय लिएपछि गौतम रोक्किए । उनी नेकपा एसमा पनि गएनन् ।
अहिले गौतमक वृहत कम्युनिस्ट एकताको रणनीति बनाएर भित्री रुपमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ । माओवादी, नेकपा एस, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतको एकताको प्रयास चलिरहेको छ । गौतमले पनि त्यही एकता प्रयासमा भूमिका निभाइरहेको बुझिएको छ । बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर जानका लागि नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत मिलाएर लाने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा गौतमले पनि भूमिका निभाइरहेको बुझिएको छ ।
← वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा सङ्कटमा सहकारी
भीम रावललाई निरन्तर धक्का, एमालेमा टिक्लान् ? →
हिंसा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधक ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
नेपाललाई बाइडेनको निम्तो ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
१३५ निर्वाचन क्षेत्रबाट काँग्रेसले छान्यो ३५०० बढी प्रतिनिधि ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
दुधको मूल्य ह्वात्तै बढाउने तयारी, १४ रुपैयाँसम्म वृद्धिको प्रस्ताव ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
झन् कसिलो बन्दै काँग्रेसका गुट ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
काभ्रे काग्रेशमा लामा र पौडेल लड्ने ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०
एमाले महाधिवेशनमा प्यानल बनाए कारबाही, पर्चा–पम्प्लेटमा बन्देज ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०६:१०